Manasa fivarotana voninkazo any amin'ny Floristum.ru izahay
- mpanjifa vaovao tsy andoavam-bola!
Floristum.ru dia manome fitaovana mahomby hisarihana mpanjifa vaovao ho an'ny fivarotana voninkazo sy mpivarotra voninkazo tsy andoavam-bola.
Ny serivisy dia tena mora ampiasaina:
Ampidiro ao anaty rafitra ny fehezam-boninkazo.
Raiso ny baiko vaovao.
Ny fisoratana anarana sy ny asa ao amin'ny rafitra dia tsy mitaky sarany.
Tsy ilaina ny mampiditra vola ao anaty rafitra, ankoatr'izay, ny asan'ny fametrahana vola dia tsy omena.
Fisoratana anarana tsotra,
izay tsy mila iray minitra akory, ary afaka mampakatra avy hatrany ny fehezam-boninkazoo ao amin'ny Floristum.ru ianao ary mahazo baiko vaovao.
Fepetra takiana farafahakeliny ho an'ny fitaovana teknikan'ny florist sy ny iraka.
Ny hany ilainao hiara-miasa amin'ny rafitra sy hamenoana ny baiko dia ny telefaona rehetra, na dia ny bokotra fanindriana tsotra indrindra aza. Azo atao izany noho ny rafitra fampandrenesana mifototra amin'ny SMS sy ergonomic mifototra amin'ny rafitra fitantanana filaminana izay tsy mila fametrahana apetraka amin'ny telefaon'ireo florist sy mpampita hafatra.
Fanehoan-kevitra avy amin'ny mpanjifa amin'ny hevitra.
Mba hampitomboana ny varotra dia zava-dehibe tokoa ny fahafantarana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny fandefasana voninkazo. Ny Floristum.ru dia mamporisika ny mpanjifa tsirairay hamela hevitra momba ilay fehezam-boninkazo voarainy.
Azonao atao ny mivarotra fehezam-boninkazo ao amin'ny Floristum.ru raha:
Vonona ny hiasa amin'ny maha ara-dalàna anao amin'ny alàlan'ny famindrana banky ianao.
Manana ny serivisy fanaterana anao manokana ianao na mpiara-miasa amin'ny serivisy fanaterana.
Miombon-kevitra amin'ny komisiona rafitra izahay: 20% ho an'ny fehezam-boninkazo, 10% ho an'ny voninkazo isam-bolana.
Hitanay toy izany ny magazay mpiara-miasa aminay:
Ny mpiara-miasa Floristum.ru dia tsy handao ny mpanjifany tsy misy voninkazo, mahalala fomba ihany koa izy ireo ary tsy matahotra zava-tsarotra. Ireo fivarotana dia mikendry ny hanatsara hatrany ny kalitaon'ny asany, ny kalitaon'ny serivisy, vonona izy ireo hiara-hivoatra amin'ny vavahady.
Mamporisika ireo magazay misy hevitra tsara izahay:
Ao amin'ny Floristum.ru, ny mpanjifa dia afaka mamela fanehoan-kevitra momba ny fitiavany ny asa, ny fahafaham-po ananany amin'ny kalitaon'ny fandefasana. Afaka manome naoty sahaza azy ireo koa izy ireo. Araka ny antontan'isa dia mihoatra ny antsasaky ny mpanjifa no manao izany, ary izany no fananganana ny naoty ny magazay sy ny mpanao asa-tanana. Ary mifototra amin'izany, mpanao asa tanana sy fivarotana voninkazo miaraka amin'ny naoty ambony no voalohany niseho tamin'ny valin'ny fikarohana tao amin'ilay tranonkala.
Misoratra anarana izao izao dia izao!